ပဒုမ္မာကြာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပဒုမ္မာကြာ (Nelumbo nucifera) သည် နှစ်ရှည်ပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကောင်းပါက ၎င်း၏ အစေ့ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင် သုံးစွဲနိုင်သည်။ နှစ်အကြာဆုံး မှတ်တမ်းအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ခြောက်သွေ့နေသော ကန်မျက်နှာပြင်မှ နှစ်ပေါင်း ၁၃၀၀ သက်တမ်းရှိသော အစေ့များကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
အာရှ အပူပိုင်းဒေသ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ကွင်းစလန်ပြည်နယ်တို့တွင် စတင်ပေါက်ရောက်သည်။ ရေရှိရာ ဥယျာဉ်များတွင် စိုက်ပျိုးလေ့ ရှိသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ တို့၏ နိုင်ငံတော် အထိမ်းအမှတ် ပန်းဖြစ်သည်။
↑ "Long-living lotus: Germination and soil -irradiation of centuries-old fruits, and cultivation, growth, and phenotypic abnormalities of offspring" (2002). American Journal of Botany 89 (2): 236–47. doi:10.3732/ajb.89.2.236. PMID 21669732.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပဒုမ္မာကြာ&oldid=711175" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။